Vanonunura iyo Apple Watch yakanyudzwa mwedzi gumi nemana mugungwa uye inoshanda | Ndinobva mac
Vanonunura iyo Apple Watch yakanyudzwa mukati memwedzi mipfumbamwe mugungwa uye inoshanda
Haisi nguva yekutanga kuti tive nenyaya inofadza nezve wachi yeApple yakapedza nguva yakanyudzwa mumvura, ndinorangarira kare kare imwe nyaya yakafanana mairi Apple Watch yechizvarwa chekutanga kana chechipiri chakawanikwa mugungwa mushure memwedzi yakati wandei chakaraswa nesurfer.
Panyaya iyi kuva mudziva pamwe kunenge kusingakuvadzi sezvo mvura yemunyu iri muvengi akaipisisa wemagetsi (zvisinei nekuti ine mvura yakaita sei) asi iwe unofanirwa kufunga kuti iyi Apple Watch yaive yeimwe inozivikanwa YouTuber, yakapfuura Mwedzi 9 yakanyudzwa.
Nguva yacho yaive ndarama yakafukidzwa uye yaibva kune imwe inozivikanwa YoutuBer. Mune ino kesi, iye munhu anotarisira kuita kuti wachi iyi ishande zvakare mushure mekuchinja bhatiri uye nekuchenesa mabatidziro mukati meiyo wachi anga ari Jerry kubva kuchiteshi. JerryRigEverything. Mushure mekugadzirisa matambudziko akawanikwa mu wachi kuti aite kuti ishande, akaidzosera kumuridzi wayo.
Kunyange chiri chokwadi kuti hauna kukwanisa kubvisa dambudziko rakakonzerwa nenguva yakanyudzwa mumvura pascreen yako. Ichi chi vhidhiyo maanotsanangura izvo zvakaitika:
Zvine musoro, chero Apple wachi inoratidza kuti inokwanisa kumira nemvura nemazvo uye mamodheru emhando dzewachi akatouya nechitupa chepamutemo kubva kuApple. Zvine musoro izvi hazvireve kuti isu tinofanirwa kugeza hongu kana hongu newachi patinoenda kumahombekombe, dziva rekushambira kana zvimwewo, nekuti kana tiine dambudziko - kana riine chekuita nemvura - Garandi yaApple haitore kugadzirisa (semamwe makambani anopa ichi chitupa) nekuti havazomboziva kana kukuvara kwechigadzirwa kuchikonzerwa nemvura kana kwete. Izvo zvavanoziva ndezvokuti akanyorova sezvo vaine akati "mahure" anomumaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Vanonunura iyo Apple Watch yakanyudzwa mukati memwedzi mipfumbamwe mugungwa uye inoshanda
New Apple Mabhuku webhusaiti evanyori inoenderana zvizere neMac
NeOvercast iwe unogona ikozvino kuteerera podcast zvakananga paApple Watch